घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू विनीसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबैभन्दा परिचित छ "Vini“। हाम्रो भिनिसियस जुनियर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रख्यात हुनु अघिको जीवन कथा, प्रख्यात कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन शामिल छ। थप रूपमा, अन्य अफ-पिच तथ्यहरू उहाँ बारे थोरै ज्ञात छ।
हो, सबैले आफ्नो महान डेरिबल्स बारे जान्दछन् जसले उहाँलाई उत्तराधिकारी बनाउँछ नेमार। यद्यपि, विनिसियस जुनियरको जीवनीलाई मात्र केहिले विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य-प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम विनिसीस जोसे पाईओआओ ओलिवेरा जुनेयर हो। विनिसीस जुनियर को जुलाई 12 को 2000th दिन मा उनको चित्रित चित्रित चित्र मा जन्म दिए। तिनी ब्राजिलको रिया डे जनेरियो शहरमा उनको पिता, विनिसीस जोसे पाइईओसाओ ओलिवेरा र उनको आमा, तात्तेना विनिसीसको जन्म भएको थियो।
दुई भाइ र बहिनीको साथ नम्र परिवारबाट आएका, भिनिसियस जुनियरका आमाबाबुलाई खाना खानु सधैं सजिलो थिएन। यद्यपि उनका मेहनती काका युलिसिसको सहयोगमा सबै कुरा राम्रो भयो।
एक बच्चाको रूपमा, विनी धेरै शान्त हुन थाल्नुभयो, भिडियो गेम खेल्न सक्ने व्यक्ति र सबै दिनको मोबाइल फोनमा हुनेछ। त्यसपछि त्यसपछि, उनी एफआईएफए विशेष गरी एफसी बार्सिलोनामा धेरै टोलीहरूसँग खेलेका थिए लिओनेल मेस्सी। एडिइडहरू एक भिडियो खेल फ्रीक हुन, जवान विनीले पनि फुटबल खेल्थे। विनिसीस को अनुसार;
म सँधै सडकमा मेरा साथीहरूसँग खेल्थें र घर जाने कारणहरू फिफा खेल्ने, खाने वा सुत्नु हो।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य-क्यारियर बिल्डअप
विनिसियसको पहिलो अनुभव फुटबलको साथ साओ गोन्कालो मा शुरू भयो, रियो दि जेनेरियोको उसको रौंडाउन उपनगर। के तपाईंलाई थाहा छ?… साओ गोन्कालो ब्राजिलको ईभान्जेलिकल क्रान्तिको मुटुमा छ र यसको छेउछाउ गुआनाबारा खाडीको प्रदूषित पानी हो। एक गरीब परिवार पृष्ठभूमिबाट केवल मूल निवासीहरू यस क्षेत्रमा बस्नेछन्।
यो साओ गोन्कालोमा थियो विनिसियस जुनियरलाई थाहा भयो र उनीसँग प्रेम भयोचापाउ, एक फुटबल कौशल जुन एक अपमानजनक फेसनमा विपक्षीको टाउकोमा बल फ्ल्याक गर्नु समावेश छ। यसले उसको आइडल पत्ता लगायो "Robinho“, उनले देखेका पहिलो व्यक्तिले यस्तो गौरवशाली चाल चालचलन गरे। एक भिडियो उनको प्रेमी देखाउँदै हेर्नुहोस् टोपी बाट सार्नुहोस् Robinho तल।
चापाउ चालले फुस्टल फुटबलको लागि भिनीको प्रेमलाई प्रगाढ बनायो। त्यस बेलादेखि उनीले गरेका सबै फुटबल रेजिष्ट्रेसनहरूमा, विनिसियस अघि बढिरहेछन् Robinho उनको संरक्षकको रूपमा।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- Futsal संग जीवन
अरू कुनै ब्राजिलियन बच्चा जस्तै, भिनिसियस जुनियरले सन् २०० age (उमेर 2006) मा आफ्नो शिक्षा सुरू गर्‍यो। उनले ब्राजिलको फ्लेमेन्गोको १२6स्कूलमध्ये एक विद्यार्थीको रूपमा शुरू गरे। दर्ता पछि, उनका आमाबाबुले उहाँ 125 बर्षसम्म पर्खनुभएन किनभने उनीहरूले उनलाई आफ्नो सफलताको कहानी सुरू गर्न अनुमति दिए। त्यो वर्ष, भिनी साओ गोन्कालोको दक्षिणमा, निटेरोइको एउटा प्रसिद्ध क्लब क्यान्टो डो रियोमा फुस्तलसँग दर्ता भयो।
विनीको फुटसल प्रशिक्षण मैदान रियो दि जेनेरोबाट टाढा छोटो फेरी सवारी थियो। सुरुमा, सबै कुरा राम्रै भयो किनकि तिनका आमाबुबाले आफ्नो छोरालाई ढुवानी गर्न सकीन्छन्। यद्यपि, यसले केहि समय लिन सकेन किनभने उनीहरूको वित्त विनिसियस जुनियरको परिवारको लागि कम हुन थाल्यो। त्यसकारण उनीहरूको छोरालाई ढुवानी गर्न गाह्रो थियो, र विकल्प क्रमबद्ध गर्नुपर्‍यो।
भिनिसियस साउ पाउलोको नगरपालिका पियाडेडमा आफ्नो काका युलिसिससँग बस्नुपर्थ्यो जुन उसको प्रशिक्षण मैदानको नजिक छ। त्यहाँ उनले सहज महसुस गरे र आफ्नो दोस्रो घरको रूपमा आफ्नो फुटस्सल खेल मैदानमा लिए।
आफ्नो फुटसल एकेडेमी छँदा, Vinicius जुनियर उनको टीमको स्तर माथि उठ्यो र आफ्नो उमेर समूह मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी बन्न। यो केहि समय लागेन उनले १० नम्बरको शर्ट सम्मानित गर्नु भएकोमा धन्यवाद जुन उसको टीमको प्लेमेकरको रूपमा तल देखा पर्‍यो।
एसिड डेरिबलिङ, विनिसीसले पनि कडा रिक्त ठाउँहरूको शोषण कसरी गर्ने भनेर सिके। यसले तिनको चपलता, रिफ्लेक्स सुधार गर्यो र अन्तर्वार्तामा उनको फुटबलिंग क्षमतालाई युवा उमेरमा अनलक गर्छ।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- फ्लेमिङ्गोमा सामेल हुदै
२०० In मा जब भानसियस years बर्षको थियो, उनका अभिभावकले उनलाई फ्लेमेन्गो एकेडेमीको लागि परीक्षणको लागि लगे। यो त्यो समय थियो जब विनिसियस जुनियरका अभिभावकहरूले आफ्ना छोरालाई फुटसलबाट एकेडेमी फुटबल खेलाडीमा रूपान्तरण गर्ने आशा गरेका थिए।
क्लबले तिनलाई सम्भावना देखाए तर उनीहरूलाई एक वर्ष पुरानो हुँदा फर्काउन उनीहरूलाई भने। आदेशमा निष्क्रिय रहन नदिने, विनिसीसले फतिटललाई स्थायी आधारमा फर्कने प्रयास गरे। यसले सफल फुटबलर बन्ने आशालाई पराजित गर्यो। उनको आमाबाबुको लागि धन्यबाद, यो कदम विलम्बित भएको थियो किनभने पछि तिनले फेट्टलको लागि फर्कन नचाहने र प्रतीक्षा गर्ने निर्णय गरेनन्।
अगस्त २०१० मा, Vinicius फ्लेमेन्गो युवा फुटबल टीम को लागी परीक्षण परीक्षा लिए र यो उत्तीर्ण भयो। परीक्षण पारित गर्न इनामको रूपमा, उनका बुबाले पहिलो फूटबल टिकट फ्लामिing्गो वरिष्ठ चिया प्रतिष्ठित एस्टाडियो लुसो ब्राजिलियोमा देख्न किन्नुभयो।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- समायोजन
फ्लेमेन्गोमा हुँदा, भिनिसियस एक युवा स्टार बने जसले केवल आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्दछन् प्रत्येक दिन। उनी आफ्नो फ्लेमेन्गो टोलीका साथीहरूसँग उनको क्लबको प्रशिक्षण सुविधामा सामेल भए जुन उसको घरबाट 70० किलोमिटर टाढा थियो।
शुरुको दिन फ्लेमेन्गोले देख्यो कि विनिसियस जुनियर परिवारले आफ्नो छोराको पालनपोषणका लागि बढी पैसा कमाउन बाध्य पारे, किनभने यो थाहा थियो कि यो उसको जीवनको महत्वपूर्ण चरण हो। बुबाले साओ पाउलोमा राम्रो जागिर खोज्न जानुभएको बेला, उसको आमाले आफ्नो काकाको साथमा बस्न बाध्य हुनुपरेको थियो जो अझै आफ्नो काकाको साथ बसिरहेको थियो। अन्त्यमा, उनका बुवाले आफ्नो जागिर पाए र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने मान्यता बने।
गाभाको माथिल्लो क्षेत्रमा, भेनिसियस जुनियरको आमाले अभ्यासको लागि उनको साथमा सँगै बस चढाउँथे। उनका छोराले आफ्ना साथीलाई साथ प्रशिक्षण दिंदा, टाटियाना धैर्यतासाथ उही पार्कमा उनलाई पर्खाइमा प्रतिक्षा गर्थे ताकि उनी फर्केर आए।
समय बित्दै जाँदा, विनिसस परिवारका लागि चीजहरू एकदम सजिलो भयो। एउटा भ्यान खरिद गरियो जसले विनिसियसलाई सिधा निन्हो डो उरुबुमा पु driven्यायो जुन उसको एकेडेमी मैदान हो।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- बढ्दै र फ्याँकिएको हुनुहोस्
फ्लेमेन्गोको लागि दर्ता गर्दा, विनिसियसले उसको आवेदनमा संकेत गरे कि उनी फिर्ता बाँकी छन्। यो एक गलत घोषणा थियो। यद्यपि यो कुरा स्पष्ट भए कि यो एक आक्रमणकारी हो र बायाँ पछाडि मात्र नभई हालसालै दावी गर्यो। यो स्पष्ट थियो जब उनले एकल हातले आफ्नो टीमको फ्रन्टलाइनलाई युवाको रूपमा पहिलो उपाधि पदकमा पुर्‍याए। तल सानो Vinicius आफ्नो पहिलो पदक मा एक भावना रहेको छ।
विजय पदकहरूको रूपमा, आफ्नो युवा प्रबन्धक सहित क्लबमा सबैले आफ्नो कब्जामा गहनाको बारेमा जानकारी गराए। विनिसीसले मात्र टूर्नामेंट पुरस्कारको खेलाडी नखोजी, तर सुनको बूट पनि गरेनन्।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- प्रगति
एक पेशेवर पछि उनको फ्लेमेन्गो पक्षको लागि एक दशक पछि बनेको थियो जब उनको बुबाले उनलाई साओ गोन्कालोको फ्लेमेन्गोको स्कूलमा लगेका थिए। यो २०१ 2017 मा भयो, उनको जीवनको सबैभन्दा अविस्मरणीय वर्ष। उनको पहिलो पदयात्रा गर्दै टिम विक्रीको ईएसपीएन एफसी एक पटक यो भन्दै मजाक बनायो;
"उनको पहिलो पदमा रहेको विनिसियस अझै बॉलको केटाजस्तो देखिन् जो मैदानमा कसैलाई नहेर्दा दौडेको थियो।"
यस्तो कठोर तुलना तुरुन्तै अन्त्य भयो विनिसेस जुनियरले आफैंलाई क्षेत्रमा सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति आफूलाई साबित गर्यो। टिम विकरी युवा ब्राजिलका पिसाब गर्ने लक्ष्यहरू हेर्न र उनको फ्लेमिनेगो पक्षको लागि एक अद्वितीय शैलीको साथ हेर्न मनाउन शोक थियो।
भिनिसियसको व्यावसायिक पदार्पणको दुई दिन पछि, फ्लेमेन्गोले उनको सम्झौताको नविकरणको घोषणा गरे। यो उनको रिलीज खण्ड € 30 देखि million 45 लाख मा वृद्धि देखेको थियो। यो निर्णय लिइएको थियो किनकि फ्लेमेन्गो बोर्डका सदस्यहरूले युरोपेली क्लबहरूले हेराइको अपेक्षा गरेका थिए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?... म्यान्चेस्टर युनाइटेड कथित पहिलो क्लबहरू मध्ये एक थियो जसले आफ्नो उपलब्धता प्राप्त गर्न र सम्भवतः उनलाई सपनाको थिएटरमा प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरे। दुर्भाग्यवस, म्यान युनाइटेड अध्यक्ष, एड वुडवर्ड फ्लेमेन्गोसँग वार्तालापमा धेरै सफलता भएन र स्थानान्तरण वार्ता टाढा भएन।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- टूर्नामेंट
त्यही वर्ष मार्च 2017 मा, दक्षिण अमेरिकी यु-एक्सएनक्सक्स च्याम्पियनशिपमा आए र विनिसीसलाई ब्राजिलको प्रतिनिधित्व गर्न आमन्त्रित गरियो। टूर्नामेंट मा, विनिसीस ले सात गोल को स्कोर गरेर दक्षिण अमेरिका को परिचय दिए को रूप मा ब्राजील को रेकर्ड 17th को लागि टूर्नामेंट जीता।
ट्राफी जितेपछि भिन्सिअस ज्युनियरलाई टूर्नामेन्टको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी मात्र भनिएको थिएन। उनले top गोलको साथ शीर्ष गोल स्कोरर बन्ने बाटोमा नाच पनि गरे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… ब्राजिल र पाराग्वेको बीच खेलमा टूर्नामेंटको दौडान विनिसीसले तीन सुन्दर सुन्दर उत्पादन गरे chapeaus द्रुत उत्तराधिकार मा र पछि बल उनको दाहिने काँध संग स collected्कलन। तलको भिडियो हेर्नुहोस्।
If टोपी फिल्म पहिले नै ट्रेडमार्क गरिएको थिएन, यो ठीक त्यहाँ त्यसपछि ट्रेडमार्क गरिएको थियो।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- युरोपेली हंट
टूर्नामेंट पछि, युरोपियन क्लबहरूले भिनिसेसका लागि उच्च मूल्य ट्यागको बारेमा उजुरी गरे। उनीहरूले दावी गरे कि उनी एक जना किशोरी हुन् जसले कसलाई व्यावसायिक स्तरमा बललाई कुटपिट गरेका थिए।
फुटबल स्काउट्सले यो पनि दाबी गर्‍यो कि उसको अन्डर १ 17 फुटबलले उसको भविष्यको थोरै वा केही प्रदान गरेको छैन। यी तर्कहरू ऊमाथि राखिएको उच्च मूल्य ट्यागलाई जायज ठहर्याउन र सम्भवतः यसलाई कम भएको हेर्नुहोस्। उसको सीपको सम्बन्धमा, तिनीहरूको लागि € 45 मिलियन डलरको लागत औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ।
स्थानान्तरण लडाईहरूको बाबजुद, एफसी बार्सिलोना, रियल म्याड्रिड जस्ता यूरोपीयन क्लबहरू पासा रोल गर्न इच्छुक भए। तिनीहरू दुबै शर्तहरूमा ic 'मिलियन डलर भुनीसिस सेवाका लागि तिर्न तयार थिए। दुबै टोलीहरू पहिलो पटक दुई तिहाई पैसा तिर्न इच्छुक थिए र अर्को किस्त तिर्न एक पटक उसले आफूलाई स्पेनको शीर्ष उडानकर्ता साबित गरे।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- निर्णय
यो रियलको कडा प्रतिद्वंद्वीहरूको लागि लामो समय लागेन बार्सिलोना विनिसीस जुनियरको लागि पहिलो छनोटको रुपमा दृश्यमा उभिएको थियो। यो तथ्यको कारण थियो कि विनिसीसले दुवै वास्तविकता र फीफामा एफसी बार्सिलोनालाई प्रेम गरेको थिए।
ब्राजिलमा यो अफवाह पनि थियो नेमार शिविर नौकाका गुणहरू प्रकट गर्न आफैंले भिन्सिउसलाई सम्पर्क गरेका थिए। यद्यपि, एफसी बार्सिलोना आफ्नो खगोल विज्ञान रिलीज क्लजसँग मेल खान इच्छुक थिएन। स्थानान्तरण राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको थियो, धेरै जसो छोडेको छेउमा बाँधिएको कारण फुलेको मूल्य ट्याग र उसको उमेरले समस्याहरू सिर्जना गरेकोमा धन्यवाद।
त्यतिबेला एफसी बार्सिलोनाले 16-वर्ष-पुरानो सनसनीमा निर्णय गरेको थियो, रियल म्याड्रिडले पूर्ण बलको साथ कदम चाल्थ्यो। तिनीहरू € 46 डलर तिर्नु अगाडी गए र अन्तमा दौड जित्यो। 8,000 किलोमिटर स्पेनमा भन्दा बढी यात्रा गर्नुको सट्टा विनिसीसलाई ब्राजिलमा जुलाई 2018 सम्म फलामेनगोमा विकास गर्न अनुमति दिइएको थियो।
रियल मैड्रिडका लागि हस्ताक्षर गरेपछि तुरुन्तै अफवाहहरू उड्न थाले कि विनाशियस जुनियरको परिवार उनलाई पछाडि पछाडि थियो र ऊ होईन। साथै अनुहारको कारण ऊ कहिल्यै रियल म्याड्रिड चाहँदैन। अन्तर्वार्ता पश्चात उनका काका युलिसिसले दावी गरे कि उनको निर्णयमा भेनिसियस नै उनी हुन् जसले उनीसँग कुराकानी गरे। उसको शब्दमा;
मैले उसलाई बोलाएँ र भनें, 'तपाईले निर्णय गर्नु पर्छ।' र उनको जवाफ थियो: "Hala मैड्रिड!" म खुशीको लागि परमेश्वरलाई कसम दिन्छु। साथै, Casemiro र मार्सेलो विनीसीसस पनि रियल म्याड्रिडमा आउन चाहन्थे कि उनीहरूले उनलाई मदत गर्नेछन्।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… भिनिसियस जुनियरको म्याड्रिडमा स्थानान्तरण ऐतिहासिक भयो र उनी फुटबलमा बेचेको १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरको सबैभन्दा महँगो खेलाडीको रूपमा मनाउन थाल्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- सम्बन्ध जीवन
निस्सन्देह, उसले आफ्नो मोटामोटी million million मिलियन रक्षा गर्न समय एक जिम्मेवारी र मूल्यको साथ आउँछ। यसको अर्थ हो उसले आफ्नो सम्बन्ध जीवन धेरै निजी राख्नु पर्छ। भिनिसियस जुनियरको प्रेमिका वा पत्नीको बारेमा प्रश्नहरूले तलको फोटोको लागि केही चाखलाग्दो विचारहरू उत्पन्न गरेको छ।
तथापि, यो केवल समय हो कि विनीसीस जुनियर रिसेप्शन स्टेटस को बारे मा उचित तथ्यों को स्वयं को अनावरण गर्नु भन्दा सही तथ्य हो।
विनिसीस जुनियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तथ्य- व्यक्तिगत तथ्यहरू
विनिसीससँग एक सहज र भावनात्मक व्यक्तित्व छ। उहाँ धेरै भावनात्मक, संवेदनशील हुनुहुन्छ र तिनको परिवार र घरको बारेमा गहिराइबारे गहिरो कुरा राख्नुहुन्छ। यसैले उहाँले आफ्नो निजी जीवन र सम्बन्ध जीवन धेरै निजी बनाउनुहुन्छ। तथापि, विनिसीसले एक सुन्दर स्पेनी पत्रकारको साथ एक साक्षात्कारको समयमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारे केहि जानकारी दिए।
उनी १ 18 वर्षको हुँदा भएको अन्तर्वार्ताले विनिसियस जुनियरको बारेमा केहि चाखलाग्दो तथ्यहरू प्रकट गर्‍यो। पहिलो, उहाँसँग एउटा घर छैन र उसका आमा बुबा बुबा अझै पनि स still्कलन र आफ्नो वित्त प्रबन्ध। दोस्रो, उनले आफ्नै देश ब्राजिलमा पनि जातिय भेदभाव भोगे। अन्त्यमा, उनका सर्वश्रेष्ठ बाल्यकालका यादहरू फिफा खेल्ने वरिपरि घुम्छन्। यो तेस्रो भिनिसियस जुनियर तथ्य पछि आए जब उनले पत्रकारलाई फिफा खेलिरहेको ब्याक क्यामेरा शट लिन अनुमति दिए।
FIFA को कुरा गर्दै, ईए खेल को धेरै प्रशंसकहरु र 93 फीफा विश्व कप संग सम्बद्ध 22 उमेर मा 2022 + मार्जिन सम्म पुग्ने कैरियर मोड मार्फत पुष्टि गरे।
Vinicius जूनियर व्यक्तित्व तथ्य: विनिसीस जूनियर अल्कोहल तर कोका कोला मात्र पिउने छैन। पहिलो प्रभाव एक बारेमा उहाँलाई तल चित्र मा देखेको एक बदसूरत रूप सुझाव।
आफ्नो व्यक्तिगत तथ्याङ्कबारे कुरा गर्दै, Vinicius एक पटक भन्नुभयो।
"मेरो बुबा र मेरो परिवारले मलाई नराम्रा सबै चीजहरूबाट जोगाउनु हुन्छ त्यसैले म त्यस्ता मानिसहरूसँग रहन्छु जसले मलाई सँधै समर्थन गर्दछन् र शुरूदेखि नै मसँग छु।"
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Vinicius जूनियर बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्यहरू पढ्नको लागि समय निकाल्नको लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।